Sidee Loogu Dhejiyaa Codsiga Heesta On Twitch? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo dhigaa codsi hees ah Twitch?
Waxaa laga yaabaa 7, 2021 0 comments 392
Warshadaha dhijitaalka ahi way sii kordhayaan xitaa maalin kasta, iyada oo waliba leh dhowr aalado dijitaal ah waxay ka mid yihiin noloshooda heerka isticmaalayaasha firfircoon, kuwaas oo shaki la’aan dayactira internetka iyo goobtan oo kale. Tani waa kiiska bogaggan ama aaladaha internetka ee u oggolaanaya gudbinta waxyaabaha.
Laakiin bulshada jecel daawashada iyo ciyaarida ciyaaraha fiidiyowga shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan, maxaa yeelay waxa ku jira ayaa sii ahaanaya oo ka gudbaya dhammaan noocyada xuduudaha, shaki la'aan, Twitch wuxuu sii wadaa inuu noqdo hormuudka iyo madaxa waaxdan. Sidaa darteed, xaddiga tartanka lama doodi karo oo qaar badan ayaa raba inay ka duwanaadaans oo ku dar waxyaabo cusub waxyaabahaaga, oo ku daraya codsi hees ah fiidiyowyada ayaa ah ikhtiyaar weyn.
Dejinta codsiyada heesta ee 'Twitch'
Barxadda 'Twitch platform', shaki la'aan, waa mid ka mid ah bogagga ugu raadinta badan uguna adeegsiga badan xilligan, sidoo kalena lagu muujiyo sida ugu fiican markay tahay wuxuu ku tusayaa dhammaan noocyada ay ka kooban yihiin iyadoo loo marayo warbaahinta internetka. Sababtoo ah baahida iyo tirada badan ee isticmaaleyaasha u adeegsada inay ku helaan dhagaystayaal, dad badan ayaa isku dayaya inay xoogga saaraan.
Shaki la'aan, mid ka mid ah hababka looga fogaan karo aamusnaanta aan raaxo lahayn iyo in lagu daro qiimaha waxa ku jira waa muusikada ama codsi heesta, inta ay baahinayso. Waxa aysan dad badani ogayn ayaa ah in heesaha kaladuwan ay yihiin kuwo xuquuqdooda la ilaaliyo sidaa darteedna loo xafiday loona ilaaliyay, taas oo abuuri karta dhibaatooyin kaladuwan hadaan la ogaan
Maadaama xuquuqda lahaanshuhu ay tahay wax xasaasi ah, idaacado badan ayaa la ciqaabi karaa. Kadib, waa lagama maarmaan in la helo hab loo isticmaalo iyada oo aan dhibaato ku qabin kanaalka, Si tan loo sameeyo, waxaa marka hore loo baahan yahay in la go'aamiyo sida aad ku ogaan karto heesaha sida sharciga ah loogu isticmaali karo barxadda 'Twitch'.
Ikhtiyaarrada loogu talagalay isticmaalka heesta heesta 'Twitch'
Waxaa jira dhowr waddo oo loo adeegsado heesaha caanka ah iyadoon xuquuq-lahaanshuhu noqon arrin. Tan awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in la kireysto mid ka mid ah adeegyada loo fasaxay baahinta muusikada, oo ay tahay inay ka soo baxaan; "Cudurka Epidemic", oo qiimihiisu yahay bil kasta 13 euro iyo "Elevato Elements" oo wadarta qiimaha bishii ah 14 euro.
Waxyaabaha muusigga ah ee loo oggol yahay barta 'Twitch' oo aan macnaheedu ahayn wax ciqaab ah waa kuwa muusikada uu leeyahay qofka, heesaha dadku u haystaan ​​shati, bandhigyada lagu sameeyay heesaha Twitch "Twitch Sings", raadadka maktabadda muusikada ee madal.
Heesaha muusikada ee aan loo adeegsan karin barta 'Twitch', waxyaabaha ugu waawayn waxaa ka mid ah; Bandhigyada heesta ee qaabka raadiyaha, fadhiyada DJ, bandhigyada karaoke. Taranka heesta iyo qiimayaasha. Si aad u hesho muusigga 'Twitch' oo aad uga fogaato dhibaatooyinka, waxaa lagugula talinayaa inaad booqato boggaga muusikada gaarka ah, sida:
Maktabad kale oo la mid ah, loo fasaxay tan.
Waa lagama maarmaan in la xoojiyo in ay jiraan dhulal aan dhammaad lahayn oo waxay ka shaqeeyaan inay tan gaaraan, iyaga oo aan haysan nooc lacag ah, sida ay yihiin; maktabadda muusikada ee Twitch, Twitch Fm 'ee Spotify, Pretzel Rocks, iyo kuwo kale.
1 Dejinta codsiyada heesta ee 'Twitch'
1.1 Ikhtiyaarrada loogu talagalay isticmaalka heesta heesta 'Twitch'
2 Waxyaabaha maskaxda lagu hayo
Sidee muusikada loogu dhejiyaa heerarka WhatsApp?
Sidee loo dhigaa bartaada 'Instagram'?